Ihe ngosi ohuru maka igodo maka gam akporo Q weputara na Xiaomi | Gam akporosis
Google na-akwado maka gam akporo Q ụfọdụ ihe ịtụnanya karịa ọzọ dị ka ọ na-eme na mmegharị azụ azụ site n'akụkụ nke anyị hụrụ na Xiaomi. Nke ahụ bụ, ọ ga-ebubata ya na akara ndị China ka ọ bụrụ otu n'ime akwụkwọ akụkọ ya gbasara mmekọrịta na mmegharị ahụ.
Ewepu na isiokwu abalị, ọnọdụ desktọọpụ, njikwa nzuzo ọhụụ Na ọtụtụ ndị ọzọ, Google na-anwa imeziwanye ahụmịhe nchọgharị enweghị ihe ngosi gam akporo gam akporo. Samsung amalitela ngwa iji meziwanye ahụmịhe a dịka ọ dị na Otu Aka Aka +.
Mana ihe niile yiri ka ọ na-egosi na Google bụ na-anwa iji mmeghari ohuru nakwa na ọ bụ nanị nke ịla azụ. Anyị na-ekwu okwu banyere mmegharị ahụ n'akụkụ aka ekpe nke ihuenyo iji laa azụ. Ọ bụ ezie na ụfọdụ nwere ike ịsị na ọ na-ada ada n'ụkpụrụ ụkpụrụ agagharị na ngwa na Nhazi Ihe, nnukwu G na-anwale.
Ugbu a Gam akporo Q beta weputara adighi, ọ bụ ezie na ị nwere ike ịhụ mmegharị na vidiyo anyị na-eso gị niile. Dị nnọọ ka aka nke ngosi ahụ na-abụghị nke kachasị, enwere ọrụ fọdụrụ.
Agbanyeghị, ọ gaghị efu nnukwu ego Google iweta mmegharị ahụ melite ahụmịhe onye ọrụ na gam akporo Q. Ntughari ohuru nke gam akporo Q nke di ugbua dị na beta nke abụọ na ihe ga-abata nke kachasị nke 6 tupu agbaa egbe ikpeazụ. Anyị na-echerịrị ọnwa na-esote ọnwa Mee ka a ga-enwe isi okwu Google ebe ọ ga-agwa anyị ebe ị na-agagharị na gam akporo gị na ahụmịhe niile sitere na ọtụtụ nyiwe.
Un mmegharị ọhụụ maka gam akporo Q nke ga-enye nku igodo site na mmegharị nke ewerela usoro mbu site n'aka ndị nrụpụta ndị ọzọ dịka ndị a kpọtụrụ aha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha Google na mmegharị ọhụụ ewepụtara na Xiaomi
[Na vidiyo] 15 (+3) kachasị mma maka Samsung Galaxy S10 +